Sida loo baro caruurtaada waxa ay u adkeysigu yahay | Bezzia
Sida loo baro carruurtaada waxa ay u adkeysigu yahay
Maria Jose Roldan | 15/05/2021 10:52 | Carruurta wax baro
Nasiib darrose, xanuunka iyo silica waa qeyb nolosha ka mid ah waana muhiim in la ogaado sida loola kulmo daqiiqadahaas oo kale. Xagga carruurta, xaaladdu way ka sii adkaan kartaa. Geerida qof u dhow ama isbeddel fudud oo guriga ah ayaa si xun u saameyn kara caafimaadka shucuurta ilmaha.
Taasi waa sababta waalidku ugu qasban yahay inay caruurtooda baraan inay ogaadaan waxa adkeysigu yahay iyo habkan si looga adkaado daqiiqado murugsan oo laga yaabo inay haystaan ​​noloshooda oo dhan.
1 Waa maxay adkeysi?
2 Tilmaamaha Waalidiinta ay Raacayaan si ay Caruurtooda u Bartaan Adkaysiga
Waa maxay adkeysi?
Adkaysigu waa wax aan ka badnayn awoodda uu qofku leeyahay, inaad awood u yeelatid marka aad la kulanto xaaladaha loo arko inay adag yihiin oo dhib badan yihiin. Awooddaan waa in laga barto da 'yar. Waxbarashada waalidku waa furaha si ay carruurtu u bartaan inay adkaysi yeeshaan sannadaha ugu horreeya nolosha. Kadib waxaan kuu sheegeynaa sida waalidku uga shaqeyn lahaa u adkeysiga caruurtooda.
Tilmaamaha Waalidiinta ay Raacayaan si ay Caruurtooda u Bartaan Adkaysiga
Marka ugu horeysa, caruurtu waa inay dareemaan kalsooni ku filan oo ay ula kulmi karaan caqabadaha qaarkood. Kuwa yar yar waa inay ogaadaan in ficil kasta uu leeyahay cawaaqibkiisa tan si ay u dhacdana waa inay gaaraan go'aanadooda. Carruurtu waa inay tijaabiyaan waana wax iska caadi ah in mararka qaarkood ay saxan yihiin mararka kalena ay qaldan yihiin. Waxa ugu muhiimsan ayaa ah inay dareemaan taageerada waqti kasta waalidkood sidaa darteedna ay xoojiyaan kalsoonidooda.
Ka caawinta inay dhisaan kalsoonidooda ayaa muhiim u ah barashada waxa ay u adkeysigu yahay. Dareemidda waxtar iyo sidoo kale karti, Shaki la'aan waxay cunugga ka caawinaysaa inuu la kulmo dhibaatooyinka kala duwan ee ka soo bixi kara noloshiisa oo dhan.
Cunsurka kale ee ay tahay inay waaliddiintu la shaqeeyaan carruurtooda waa arrinta jahwareerka. Carruurtu waa inay ogaadaan inay jiraan waqtiyo aan wax la gaadhin markii ugu horreysay iyo inay caadi tahay in qalad la sameeyo. Laakiin sababtaas darteed, maahan inaad jahwareerto, waa inaad noqotaa mid jilicsan si aad uhesho waxaad rabto.
Ugu dambeyntii, waxaa aad muhiim u ah in carruurtu ogaadaan waxa adkeysigu yahay da 'yar. Waalidiintu waa inay baraan carruurtooda inay had iyo jeer xal u jiraan wax walba iyo inay muhiim tahay in la helo habkaas oo kuu oggolaanaya inaad ku jirto habka ugu wanaagsan ee ugu macquulsan. Waa inay cadaato inay caruurtu ku dhibtoon doonaan waqtiyo kala duwan noloshooda iyo adkeysigu waa fure ka caawinaya inay ka gudbaan xilliyada cakiran iyo kuwa adag.
Waa wax iska caadi ah in waalidku runti xumaan la kulmo markay arkeen sida carruurtoodu waqti xun u haystaan ​​oo u silcayaan, laakiin waa wax caadi ah oo ay tahay inay dhacdo sidaas darteedna ay tahay in la aqbalo. Thanks to qalabka sida adkeysiga, caruurtu waxay rajeyneysaa inay laqabsadaan dhibaatooyinkaan iyo la kulanso dareenno iyo shucuur sida xanuun ama murugo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Hooyooyinka » Carruurta wax baro » Sida loo baro carruurtaada waxa ay u adkeysigu yahay